Home EGO AFRICAN FOOTBALL Christian Benteke Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; 'Anụ ọhịa ahụ'.
Anyị Christian Benteke Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye na-achụ nta ego Belgian na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, ndụ ezinụlọ ya, na ihe ndị ọzọ a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Benteke Biography nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Christian Benteke Child Story - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
A mụrụ Christian Benteke Liolo na 3rd ụbọchị nke Disemba 1990 na Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. A mụrụ ya nne ya, Marie-Claire Benteke na nna, Jean-Pierre Benteke.
A zụlitere Benteke na ndị agha. Nna ya Jean-Pierre bụ onye isi ndị agha mana na 1993 kpebiri ịhapụ Zaire nke bụ Democratic Republic of Congo ugbu a.
Ọchịchị aka ike Mobutu Sese Seko na nwa ya nwoke Kongulu Mobutu na-achị Zaire mgbe ahụ.
N'ihi egwu nke ịbụ onye a gbuchara mgbe ọ hapụsịrị ndị agha, Jean-Pierre Benteke gbagara ya na ezinụlọ ya wee guzosie ike na Congo na mbụ chịburu Belgium.
Seechọ mgbaba bụ naanị nhọrọ dịka onye ọchịchị aka ike Mobutu Sese Seko nyerela iwu ka ejide ya. O sonyeere nwanne nna ya na Liege, Belgium. N'oge ahụ, Little Christian dị naanị atọ.
Ka anyị kwaga gị na ndụ mmekọrịta Benteke. Benteke's Early Career Akụkọ ga-aga n'ihu na mpempe akwụkwọ a.
Christian Benteke Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Christian Benteke achọbeghị onye ọlụlụ ya. Ọ gara nke ọma ịchọta akụkụ nke ya na-efu.
Ọ bụ onye nke Fortune. Benteke esoro nwanyị a mara mma mara mma kemgbe ọ dị afọ iri na ụma.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ na-ejikọta eriri ya na onye ya na ya na-ebi ogologo oge n'ememe nzuzo. Benteke kpọrọ agbamakwụkwọ ya dị ka nke metụtara ememe n'etiti 'mma na ajọ anụ'.
N'ịkọwa ya, Benteke kwetara na mgbasaozi mgbasa ozi: "Mma na anụ ọhịa. Ụbọchị Kasị Mma nke 8-07-17. "
Ma Christian Benteke na Fortune nwere nwa nwoke tupu ha ekekọta eriri. Nwa ya nwoke mara nma keere oke nke agbamakwụkwọ nke nne na nna ya.
Mgbe ị na-ele chap, ị ga-ahụ Benteke nke dị nro edere na ihu ya niile.
Christian Benteke Bio - alitydị mmadụ:
Benteke bụ Sagittarius site na ịmụ nwa. Ọ nwere àgwà na-esonụ dị ka àgwà zodiac.
Ike nke Christian Benteke: Ịba ụba, ezigbo mma na ịkpa ọchị
Ajọ Ndị Kraịst Benteke: Nkwa ndị ọzọ kariri ike ịnapụta, enweghi ndidi, ga-ekwu ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkwa.
Ihe Christian Benteke nwere mmasị: Nnwere onwe, njem, nkà ihe ọmụma na ịdị n'èzí
Ihe Christian Benteke achọghị: Ndị na-agba agba, na-eche echiche na mgbidi na mgbidi.
Ee, Jesse Lingard wetara 'dab' ịgba egwu nke ọma na Premier League. N'ezie, ọ bụghị ya bụ kpakpando bọọlụ izizi ga-eme mmemme ịgba egwu nke na-amalite mgbe ụfọdụ site na okwukwe aka.
Christian Benteke emeelarị ka ọ bụrụ na ezigbo enyi ya, Mamadou Sakho.
Christian Benteke Ndụ Ezinụlọ:
Nna ya siri ike ma bụrụ ezigbo ịhụnanya
Jean-Pierre Benteke nwere ike ịhapụ ndị agha ya n'egbughị oge kama ọ ga-enye ndị agha nọ n'okpuru ya ọzụzụ ọ ga-enye iwu ka o nye ụmụ ya atọ.
Otú ọ dị, Christian Benteke na-enwe obi ụtọ maka nrụgide ya ma chọọ ndụmọdụ ya mgbe ya na Klopp kwụsịrị. “Papa m bụ nwoke obi tara mmiri,” Benteke gwara 'The Independent'.
“Ọ na-agwa m na ọrụ ndị ịgba ọsọ bọọlụ adịteghị aka, m ga-ejirịrị ya mee ihe. Nne m dị nro karịa. Ọ na-ekwu n’obi ya.
Papa m gwara m eziokwu. Ọ bụrụ na m na-ekpofu ihe n’egwuregwu, ọ na-eme ka m mara. Ọ naghị agbachi okwu ya nkịtị. Mana ọ zụlitewo anyị nke ọma ”.
Jean-Pierre Benteke na onye ọrụ nwa ya nwoke, Eris Kismet na-emekọrịta ihe na klọb na ndị ọzọ n'aha Benteke.
Benteke nwanne ya nwoke bụ Jonathan bụ ọkachamara na-egwu egwuregwu na-egwu egwu dị ka onye na-eti egwu maka ndị Belgium Zulte Waregem. Jonathan Benteke Lifeka mụrụ na 28th ụbọchị nke Eprel 1995.
Ọ sonyeere Crystal Palace na oge 2016/2017 tupu ọ kwaga Omonia na Cyprus n'otu oge ahụ. Benteke nwekwara nwanne nwanyị a na-akpọ Sara.
Christian Benteke Untold Biography - The Social Media Error:
A manyere Christian Benteke ka ọ rịọ mgbaghara mgbe ọ gbanwere ihe ọ na-ekwu na ọ bịanyere aka na Burnley.
Nke a mere mgbe ọ kwụsịrị ịgafe Liverpool na Crystal Palace. Ihe na-esochi ya bụ mmejọ Twitter dị ka a hụrụ n'okpuru.
Otu n'ime onye na - eso ụzọ ya bụ onye na - akatọ ya.
Mgbe Benteke chọpụtasịrị njehie ahụ, ọ rịọrọ mgbaghara ma kpasuo ụta dịka e gosipụtara n'okpuru ebe a.
Christian Benteke Biography - Malite na Football:
Little Benteke mepụtara talent talent ya dị egwu na n'okporo ámá Liege dị ka ọtụtụ kpakpando ndị Belgium nke ọgbọ ya, ụfọdụ n'ime ha dịka Vincent Kompany mụrụkwa na Congo.
N'okwu ya ...“Amalitere m n'okporo ámá, soro ndị di m na-egwuri egwu ná mgbede, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ," ka ọ gwara 'The Independent'.
Amalitere m igwu egwu na Axel Witsel, onye si Liege. Ọ na-egwuri egwu n'okporo ámá. Kompany, (Mousa) Dembele, (Kevin) Mirallas niile malitere igwu egwu n'okporo ámá ".
Benteke malitere football ntorobịa ya maka JS Pierreuse na emesia Standard Liège tupu ọ kwaga Genk.
Paul Lambert nyere Benteke nkwụsị mbụ ya na bọọlụ bekee na Aston Villa. Agbanyeghị, mgbe ọ hụrụ na klọb ahụ anaghị aga n'ụzọ ziri ezi ọ wuru na Liverpool. Nke a na-esote site na ịkwaga Crystal Palace. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọ kpọrọ akụkọ akụkọ Arsenal Thierry Henry dị ka nwoke ọ na-ele anya na nke kachasị na football.
Benteke hụrụ basketball n'anya na-ekweta na ọ bụ Cleveland Cavaliers fan n'ihi nnukwu LeBron James.
Daalụ maka ịgụ Christian Benteke Child Story tinyere akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!